इजरायलका लागि राजदुत चयन डा. तुम्वाहाम्फे सहित १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता :: a1nepal.com.np
इजरायलका लागि राजदुत चयन डा. तुम्वाहाम्फे सहित १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता
ओली सरकारको वहिर्गमन संगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्टाउन सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिनमै दाहाल नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिई ओली सरकारको निर्णय उल्टाउने कामको थालनी गरेको हो । यससँगै इजरायलकोलागि चयन भएकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेको सिफारिस पनि दाहाल सरकारले फिर्ता गरेको छ । उनीसँगै सिफारिस फिर्ता हुने अन्यमा एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे (चीन) डा. खड्गबहादुर केसी (जापान), डा. नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले (श्रीलंका), (इजरायल), अलि अख्तर मिकरानी (साउदी अरेबिया) र युवराज कार्की (गणतन्त्र कोरिया) रहेका छन् । त्यस्तै, माओवादीबाट सिफारिसमा परेका युवनाथ लम्साल (डेनमार्क), लक्की शेर्पा (अस्ट्रेलिया), प्रा.डा. महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत (कतार) र पदम सुन्दास (बहराइन) को नाम पनि फिर्ता भएको छ । अन्य दलको सिफारिसमा परेका खगेन्द्र बस्न्यात (बंगलादेश), निरञ्जनकुमार थापा (म्यान्मार), शर्मिला पराजुली ढकाल (ओमान) र भरतबहादुर रायमाझी (संयुक्त अरब इमिरेट्स) को नाम पनि फिर्ता गरिएको छ । उनीहरू सबैको नाम शुक्रबारै सुनुवाइ गर्न नपर्ने निर्णय संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले गरेको छ ।
राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा दाहालले पूर्ववर्ती सरकारको निर्णय उल्टाएका हुन् । सिफारिस फिर्ता लिइएको राजदूतहरूको शुक्रबारबाटै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी संसदीय समितिले गरेको थियो । सोही जानकारीका आधारमा शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओली सरकारको निर्णय उल्टाउँदै १४ जना प्रस्तावित राजदूतको नाम सुनुवाइबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेकामध्ये राजनीतिक दलको कोटाबाट चयन भएका उल्लेखित १४ राजदूतहरूको सिफारिस दाहाल सरकारले फिर्ता लिएको हो । प्रधानमन्त्री बनेपछि शुक्रबार बसेको दोस्रो मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजदूत नियुक्तिको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । दाहालले बिहीबार नै राजदूत सिफारिसको निर्णय उल्टाउने योजना बनाएका थिए । तर, प्रस्ताव नै तयार नभएका कारण शुक्रबारको बैठकबाट सो निर्णय गरिएको हो । ओली सरकारले सिफारिस गरेकामध्ये ८ राजदूतको नाम भने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । सहसचिवबाट सिफारिस भएका सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झविन्द्रप्रसाद अर्याल, दुर्गाबहादुर क्षत्री र लोकबहादुर थापाको नाम फिर्ता नलिइएका कारण अनुमोदन भएको हो ।
माओवादीसमेत सहभागी ओली नेतृत्वको सरकारले गत ७ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न देशको राजदूतका लागि २२ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
दाहाल सरकारले एमाले, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य दलबाट सिफारिस भएका राजदूत रोक्न सो निर्णय गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई पेलेर जाने नीतिअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले यो निर्णय लिएको दाहाल सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ‘एमालेलाई पेलेर जाने नीति लिएको स्पष्ट संकेत दिइएको छ, ओली सरकारका अरू पनि थुप्रै निर्णय उल्टिन्छन्,’ मन्त्रीले भने ।
नमस्ते नेपालद्वारा आयोजना गरिएको तीज कार्यक्रम भब्य रुपमा सम्पन्न कस्ता हलमा तीजको कार्यक्रम हुदैछन् इजरायलमा यसपाली ? इजरायलका दुई धार्मिक संस्थाको आयोजनामा सयुक्त रुपमा श्री कृष्णाष्टमी मनाईदै एक लाख ५७ हजार घुससहित इञ्जिनियर पक्राउ सामुदायिक केन्द्र निर्माणार्थ महावाणिज्यदूत चन्द्र योञ्जनले ५० हजार डलर सहयोग घोषणा मगर संघ इजरायल आदिवासी जनजाती महांसंघ इजरायलमा आवद्द नरहेको घोषणा इजरायलमा नयाँ बर्ष सांगितिक साँझ २०७३ भव्य रुपमा सम्पन्न बसन्त ऋतुको आगमनसँगै आयोजित रंगीन काव्य उत्सवले रंगियो इजरायली भुमी इजरायलमा मृत्युवरण गरेकी गोन्दा शेर्पाको परिवारलाई करिव पौने ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण ‘नयाँ बर्ष सांगितिक धमाका २०७३’ मा सहभागिता जनाउन तेरिया मगर लगायतका कलाकारहरु इजरायल आउदै
← दाहालले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेकै दिन रुक्मांगद् कट्वालले गरेका अतिकठोर टिप्पणीहरु	ब्युटिपार्लर खासै जान्नँ – इन्दिरा जोशी, गायिका →